Firefox 53, vhezheni itsva yemakomputa ane simba kwazvo | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura, vhoriyamu yakatsiga yeMozilla Firefox 53 yaburitswa.Iyi vhezheni itsva yeakakurumbira yemahara webhu bhurawuza yakatakurwa nenhau asi kunyangwe isipo.
Pakati pezvinhu zvitsva zveiyo nyowani vhezheni, Mozilla Firefox 53 inobvisa rutsigiro rwevakuru ma processor kubva kuIntel pamwe nemaitiro ekare eMicrosoft anoshanda. Iyo zvakare inosanganisa maturusi matsva atoziviswa senge Quantum, chikamu cheinjini nyowani yewebhu iyo Firefox ichave nayo mune ayo emangwana vhezheni.
Chekutanga pane zvese, Mozilla Firefox 53 haichapi rutsigiro rwevakuru masisitimu anoshanda seWindows XP kana Windows Vista uye haizotsigire mapurosesa akura kupfuura Pentium 4 uye AMD Opteron. Izvo zvatangawo kubvisa rutsigiro rwema 32-bit masisitimu, mune ino kesi 32-bit shanduro dzeMac OS X.
Quantum Compositor icharerutsa maitiro mutoro paMozilla Firefox 53
Quantum Compositor chishandiso chitsva chakaunzwa muMozilla Firefox 53. Ichi chishandiso chichava mutariri wekugadzirisa madhiraivha uye emaraibhurari akajeka ane chekuita newebhu browser. Quantum Compositor ichaperekedzwa nemadingindira maviri, rimwe rakasviba uye rimwe rakapenya, rinozoenda pamwe neshanduro nyowani yeMozilla Firefox.
Iyo Aurora yekuparadzira chiteshi inonyangarika uye ikozvino shanduro dzekuvandudza dzeFirefox dzichagovewa mugero unonzi "Beta Channel". Maitiro ekuverenga ave nekuchinja uye mune iyi kesi izvozvi vashandisi vanogona kuona yakadarika nguva yekuverenga uye mapeji aungadai wakaverenga neiyo peji rewebhu.
Mozilla yakagara ichitaura nezve shanduko yechokwadi nebrowser yayo, kosi iyo yaizoita iyo webhurawuza padanho rakafanana neGoogle Chrome. Zvinotaridza kuti Quantum ndiyo iri munguva pfupi inotevera. Remangwana iro rinozoita iyo webhurawuza inokurumidza uye nekukurumidza kupfuura Google Chrome, asi Achazviwana zvechokwadi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 53, vhezheni itsva yemakomputa ane simba kwazvo
Lionel bino akadaro
Ipa Firefox vhoti yekutenda! Semugadziri wewebhu ini ndinobvuma kuti haina akawanda maficha anoita chrome. Asi zvisinei haisi iyo kumashure kumashure.
Pindura kuna Lionel Bino
scam fighter akadaro
FireFox imwe yeakanakisa mabhurawuza. Iine yazvino yekuvandudza yeiyo kubhurawuza kumhanya uvelichelis zvakanyanya.
Aidan anopisa akadaro
Pindura kuna Aidan Torres